FITRANDRAHANA TSY ARA-DALANA : Hamafisin’ny Fanjakana ny fiarovana ireo faritrala – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:48
Ireo olona sarona nitrandraka ala tsy ara-dalàna.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/FITRANDRAHANA TSY ARA-DALANA : Hamafisin’ny Fanjakana ny fiarovana ireo faritrala
Hentitra ny tatitry ny filankevitry ny minisitra ny alarobia teo, momba ny fiarovana ireo faritrala, isorohana ireo fanapahana hazo tsy ara-dalàna. Notinapaka nandritra izany, ny fandrarana ny fanondranana hazo avy any ivelany. Fanadihadiana…
Rado Harivelo 23 octobre 2020
Nivoaka nandritra ny filankevitry ny minisitra ny alarobia lasa teo, ny filazana fa hamafisina ny fiarovana ireo faritr’ala, mba hisorohana ny fanapahana hazo sy fitrandrahana tsy ara-dalàna. Nasongadina fa azo atao ny mivarotra sy mampiasa ireo tahirin-kazo tsotra entina handaminana ny sehatra miasa amin’ny hazo tsotra. Saingy, raràna kosa, ny fivarotana sy ny fanondranana izany any ivelany. Notsindriana nandritra ny filankevitry ny minisitra hatrany fa ireo vokatra efa voarafitra ihany no azo aondrana. Mazava, araka izany, fa miditra amin’ny sehatry ny ara-dalàna, ireo mpisehatra momba ny hazo ka ireo tahirin-kazo ihany no azo amidy sy ampiasaina. Hatreto, mbola voarara ny fanapahana hazo. Hisy ny mason-tsivana amin’ny famoahana ny vokatra. Apetraka ny tambajotra amin’ny fanaraha-maso ny fivezivezen’ny hazo sy ny famoahana izany isam-paritra. Nisy ny toromarika avy amin’ny filankevitry ny minisitra farany teo, fa ampitomboina ny faritra hovolena hazo, mba hahatrarana ny tanjona handrakotra ala an’i Madagasikara. Matoa tonga amin’izao fanapahan-kevitra toa izao, ny Fitondram-panjakana, marobe ireo karazana tsy fanarahan-dalàna, indrindra ny fitrandrahana tsy ara-dalàna.
Olona 17 tratra nitrandraka hazo tsy ara-dalàna
Ny sabotsy 7 oktobra lasa teo, tokony ho tamin’ny mitataovovonana, olona miisa 17 tra-tehaka nitrandrak’ala tsy ara-dalàna tao Ambatoboka, Kaominina ambanivohitra Anjoma Ramartina, distrikan’i Mandoto. Ny borigadin’ny zandarimaria ao Morafeno no nahasarona azy ireo. Hazoala marobe no notrandrahan’izy ireo, natao saribao sy natao « madriers ». Rehefa natao ny fisavana ny antontan-taratasy fahazoan-dalana tany amin’ireo mpitrandrak’ala, dia voamarina fa tsy nanana izany, izy ireo. Notazomina avy hatrany izy ireo nanatanterahana ny dingan’ny famotorana, izay natao ny 12 oktobra lasa teo. Na izany aza, nisy ny fandraisana andraikitra avy amin’ny Fitaleavam-paritry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ao Vakinanakaratra. Nisy ny karazana sazy nomena ireto olona tratra ambodiomby ireto, ny amin’ny tsy maintsy hambolena izy ireo hazo. Raha ny angom-baovao, olona tena sahirana ara-pivelomana ny ankabeazan’ireto olona ireto, ka antony nandraisana io fanapahan-kevitra io, mba tsy hiverenan’ny toe-javatra tahaka izao.
Ampahany amin’ireo hazo notrandrahina tsy ara-dalàna.
Maro ny fomba ataon’ireo olona amin’ny fitrandrahana hazo tsy ara-dalàna ao Atsimo Andrefana. Fampitam-baovao avy amin’ny tambajotran-tserasera no nahafaha-nanao fanaraha-maso tao Toliara, ny tapaky ny volana jolay lasa teo. Mpivarotra fanaka iray no tratra nampiditra hazo an-tsokosoko tsy ara-dalàna. Kamiao iray no itateran’izy ireo ny hazo, mba tsy ho hita ety ivelany ny hazo entiny. Efa nosamborina ireo olona ireo ary rehefa avy natao fanadihadiana tao amin’ny DREDD, ary natolotra ny Fampanoavana. Miantso fiaraha-miasa amin’ny Fitsarana ny MEDD, araka izany, mba hampihatra ny lalàna araka ny tokony ho izy amin’ireo, izay manao fitrandrahana an-tsokosoko ny harem-pirenena toy izao. Nohamafisina hatrany ny fanaraha-maso ireo mpivarotra fanaka rehetra ao amin’ny Faritra Atsimo Andrefana satria lasa manao fitrandrahana an-tsokosoko ny ala. Manentana ireo izay manana vaovao mahakasika izany, mba hizara amin’ny Fitaleavam-paritra ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana lovainjafy, ahafaha-mampitsahatra ny fitrandrahana tsy ara-dalàna any Atsimo Andrefana.
Irosoana ny ara-dalàna…
Nisy ny fikaonandoha hanarenana ny seha-pihariana momba ny hazo.
Tombony entin’ny fisian’ny ala amin’ny fanadiovana ny rivotra sy ny fiarovana ny nofon-tany dia maro koa ireo tokantrano malagasy no mivelona amin’ny fitrandrahana azy. Ilaina, araka izany, ny fametrahana fitrandrahana maharitra sy lovainjafy amin’ny seha-pihariana mifampiankina amin’ny ala, mba hisian’ny fandrosoana ara-toekarena mifandanja sy mirindra amin’ny ara-tsosialy ary mikajy ny tontolo iainana. Mifandray amin’izany indrindra ny fihaonana teo amin’ireo mpandraharaha mitrandraka ala sy ny Fitaleavam-paritry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy tany Atsimo Andrefana, entina handinihana ny vahaolana hanarenana ity lalam-pihariana ity, ny 6 s 7 oktobra lasa teo. Ezaka imasoana ny fampidirina amin’ny ara-dalàna ireo mpisehatra amin’ny fitrandrahana ny ala toy ny toerana fivarotana sy fanodinana hazo, ireo mpanao asa-tanana ary ireo mpandrafitra, mba hisian’ny tombony mipaka eo amin’ny toekaren’ny Faritra. Ho fanarenana ireo faritr’ala izay tandrahin’izy ireo dia nanao fanamby ny hamboly hazo eo amin’ny velarana mirefy 50 Ha izy ireo amin’ny ity taom-pambolen-kazo 2020-2021 ity.